Igbo, John: Lesson 094 - Ụwa kpọrọ Kraist na ndị na-eso ụzọ ya asị (Jọn 15:18 - 16:3) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 094 (The world hates Christ)
26 Mgbe onye ndụmọdụ ahụ bịara, onye m ga-ezitere gị site n'aka Nna, Mmụọ nke eziokwu ahụ, nke si n'aka Nna ahụ pụta, ọ ga-agba akaebe banyere m. 27 Unu onwe-unu gāb͕a kwa àmà, n'ihi na Mu na unu nọ site na mbu.
Gịnị bụ Atọ n'Ime Otu na-aza ịkpọasị nke ụwa na ikpogide Ọkpara Chineke n'obe? Ọ bụ iziga Mmụọ Nsọ.
Nbia nke Mmo Nso bu ihe ijuanya taa. Ọbịbịa ya na-egosi ntinye Chineke n'ime ụwa, n'ihi na o si n'aka Nna ahụ bịa ma kwekọọ na Chineke n'ịnọ na nkwenkwe. Ọ na-achọ mgbapụta ụwa, na-ekere òkè na okike. Mmo nso naeme iheo jo onwa, wee kpalie anyi rue idinso nke Chineke, dika ona ekpughe ihe ocha niile. Ọnụnọ ya n'ime ndị na-eso ụzọ na-aghọ ọbịbịa na ịdị umeala n'obi na ịjụ onwe onye, ebe ụwa na-ejide onwe ya na mpako, imechibido na aghụghọ. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ Mmụọ nke eziokwu, na-abara ndị ụwa mba n'ihi ajọ omume ha.
N'otu oge ahụ ọ na-akasi ndị ahụ na-eso ụzọ obi, na-agwa ha na Jizọs bụ Ọkpara Chineke, bụ onye mezue nzọpụta ha. Mmụọ nke Nkasi Obi na-enye mmụọ anyị akaebe nye Jizọs ka anyị hụ na Ọkpara ahụ hụrụ Nna ya n'anya. Enweghị Mmụọ Nsọ, anyị apụghị ịghọta ezi okwukwe. Anyị na ndị kwere ekwe niile na-ekwenye na anyị apụghị ịtụkwasị Jizọs Kraịst Onyenwe anyị anya site na mgbalị anyị ma ọ bụ ikike anyị, anyị apụghịkwa ịbịakwute ya, ma ọ bụghị site na mmụọ ya bụ onye kpọrọ anyị site na Oziọma ahụ ma jiri anyị nye onyinye ya, jiri mmụọ nsọ doo anyị nsọ okwukwe. Ọ na-akpọ Ndị Kraịst niile, na-ezukọta, na-enwu ọkụ ma na-eme ka ha dị nsọ nime Kraịst. Ọ na-eme ha n'okwukwe, otu ezi okwukwe. Mmụọ Nsọ na-emepụta nrụpụta ọrụ nke akaebe anyị. Ekwenyela na nghọta gị ma ọ bụ ahụmahụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụziri Kraịst ndị ọzọ. Na-enye onwe gị kpamkpam na Mmụọ nke Amamihe. Gee ntị n'okwu ya iji mụta otú e si eto Jisọs. Ige nti olu nke Mmụọ ahụ ka ị na-agba àmà ma na-akparịta ụka ga-eme ka ị bụrụ onye ozi dị irè nke Onyenwe anyị.
Kraist kporo ndi ozi ya iri na otù n'ihi ya, ihe oma di icheiche nye ha. Ndị a na-eso ụzọ bụ anya-àmà Jizos akụkọ ihe mere eme oru na ụwa. Ha ga-agba àmà banyere ihe ha hụrụ, nụ ma metụ aka. Okwu ha ga-egosiputa ezi nke nbia nke Chineke n 'wa. Okwukwe anyị dabeere na àmà ahụ. Jizos edegh akwukwo ma obu dee akwukwo ozi, kama o nyere ozi nzoputa ya n'gba àmà nke Mo Nso na okwu ndi neso uzo ya nebegide n'omume ha.
Mmo nke eziokwu ah agaghi ghaghagha, kama gosip ta ike nke ihn'anya nke Kraist site n'ọnụ ndi náeso zo Ya. Jisos n'onwe ya gwara ndi ozi ya, "Unu genwe ike mgbe Mo Nso dakwasiri unu, buru ndi aka m."
EKPERE: Anyị na-efe gị, Ọkpara Chineke, Onye Nsọ, ị bụ otu na Nna na Mmụọ Nsọ, ma hapụghị anyị ụmụ mgbei, ma zitere Mmụọ nke eziokwu ịgba àmà. Ka anyi doo anyi nso site nbido gi. Kụziere anyị ka anyị gbaara gị àmà na ọtụtụ ndị nwere ike ikwere.
Olee otú Chineke si ele ụwa nke kpogidere Kraist anya?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:37 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)